मास्क किन लगाउने? कसरी लगाउने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार मास्क किन लगाउने? कसरी लगाउने ?
२०७७, ११ बैशाख बिहीबार ०९:५१
सबै वैज्ञानिक प्रमाणले मास्क लगाउने समर्थन गर्दैन । धेरै जसो उहि दिशामा औंल्याउँछ । यस प्रमाणको मूल्यांकनले हामीलाई स्पष्ट निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ: मास्क लगाउनुहोस् । स्रोत नियन्त्रणका लागि साधारण मास्क प्रभावी छ । मास्क तपाईले घरमा नै निर्माण गर्नपनि सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि टी-शर्ट, रुमाल अथवा स्कार्फ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ऊन भन्दा सुती या रेसमको कपडा प्रयोग गर्नुस । अनुसन्धानकर्ताहरुले कागजलाई फिल्टरको रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेका छन् । सो कागजलाई कपडाको २ तहको बीच राखी प्रयोगपछि फाल्नुस । कपडाको मास्क तपाईले धोए पछि फेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । Source: shilapatra.com
Previous articleआज मातातीर्थ औंसी, आमाप्रति श्रद्धाभाव गरेर मनाइँदै
Next articleआमा भगवानको अर्को रुप